Tantaran’i Indonezia: Notohizina ny Asa na teo aza ny Fanenjehana
Fivoriambe iray nandritra ny fandrarana, ary mihaino avy eny ambony sambo ny mpanatrika sasany
Tonga dia nanao zavatra ireo rahalahy tao amin’ny sampana, raha vao henony hoe voarara ny asa. Hoy i Ronald Jacka: “Nafindranay tany amin’ny toerana azo antoka eran’i Jakarta ny taratasy tsiambaratelo, ny boky sy gazety, ary ny volan’ny sampana. Nataonay tany amin’ny toerana miafina koa ny biraon’ny sampana, ary namidinay mangingina ilay tranon’ny sampana teo aloha.”
Nanohy nitory ny ankamaroan’ireo rahalahy fa tsy natahotra. Efa niaritra fisedrana mafy izy ireo talohan’ilay fandrarana, ary mbola natoky an’i Jehovah foana. Tsy niambina tsara anefa ny rahalahy sasany. Nisy anti-panahy vitsivitsy lasa natahotra, ka nanao sonia taratasy fa tsy hitory intsony. Ny hafa indray nanome ny anaran’ny mpiara-manompo. Naniraka rahalahy matotra ny biraon’ny sampana, mba hampahery ny fiangonana sy hanampy an’ireo nanaiky lembenana. Tonga teto koa i John Booth, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, ka nanome torohevitra tena nilaina.
Hita hoe nampahery sy nampionona ny vahoakany i Jehovah, ilay Mpiandry Lehibe. (Ezek. 34:15) Niezaka nandray andraikitra bebe kokoa ny anti-panahy sady nitarika ny asa fitoriana. Ny mpitory koa nahita fomba vaovao hitoriana nefa tsy niharihary be. (Mat. 10:16) Rahalahy maro no nividy Baiboly maoderina sy mora vidy navoakan’ny Fikambanana Mampiely Baiboly, ary nampiasa an’izany raha vao nahita hirika hitoriana. Ny hafa indray nametraka boky tamin’ny olona liana, fa nesoriny fotsiny ny pejin’ny mpampanonta. Mpisava lalana maro no mody nanao mpivarotra nitety trano rehefa nitory, toy ny nataon’ireo Vavolombelona tamin’ny fotoana nitondran’ny Japoney.
Margarete sy Norbert Häusler
Nahita fomba hafa hamelezana ny Vavolombelon’i Jehovah ny Minisiteran’ny Raharaha Ara-pivavahana, tamin’ny 1977. Tsy navelany hanavao vizà intsony ny misionera. Maro tamin’izy ireo àry no nalefa tany an-tany hafa. * Hoy i Norbert Häusler, izay nanompo tany Manado niaraka tamin’i Margarete vadiny: “An-jatony ny rahalahy sy anabavy tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina mba hanao veloma anay. Niakatra ny tohatr’ilay fiaramanidina izahay, dia avy eo nitodika kely. Nikopakopa-tanana ry zareo sady nihorakoraka hoe: ‘Misaotra e! Misaotra anareo tonga tatỳ.’ Niditra tao amin’ilay fiaramanidina izahay dia nitomany.”
Fanenjehana tao Sumba
Niely eran’i Indonezia hoe voarara ny asantsika. Nampirisihin’ny Fikambanan’ny Fiangonana Protestanta ireo mpikambana tao aminy mba hampandre ny manam-pahefana raha vao mahita Vavolombelona mitory. Betsaka àry ny rahalahy sy anabavy nosamborina sy nalaina am-bavany, tany amin’ny nosy maro.
Rahalahy 23 no nampanantsoin’ny lehiben’ny miaramila tany amin’ny toby miaramilan’i Waingapu, any Sumba. Nasainy nanao sonia taratasy izy ireo hoe hiala amin’ny finoany. Tsy nanaiky ireo rahalahy, ka nasainy niverina indray ny ampitso. Dia an-tongotra 14 kilaometatra anefa ilay izy nandroso sy niverina.
Nantsoina tsirairay izy ireo rehefa tonga ny ampitso maraina, ary nasaina nanao sonia. Novelesin’ny miaramila tamin’ny rantsankazo feno tsilo izay tsy nanaiky. Nanampatra ny fony ireo miaramila ka safotra mihitsy ny rahalahy sasany. Ny hafa amin’izany miandry ny anjarany. Nony tonga ny anjaran’i Mone Kele, dia nanoratra tao amin’ilay taratasy izy. Kivy ireo Vavolombelona hafa, fa ilay lehiben’ny miaramila kosa romotra. Hay izao no nosoratany tao: “Hijanona ho Vavolombelon’i Jehovah foana aho mandrakizay!” Novonovonoin’ny miaramila i Mone ka mangamangana, ary nentina tany amin’ny hopitaly. Tsy niala tamin’ny finoany mihitsy anefa izy.
Nampijalin’ilay lehiben’ny miaramila nandritra ny 11 andro ireo rahalahy satria tiany hivadika. Nasainy nitsangana teny an-tokotany izy ireo, nefa ny masoandro migaingaina. Notereny handady tamin’ny lalana lavitra be koa ireo rahalahy, ary avy eo nasainy nihazakazaka sady nitondra entam-be. Notereny hiarahaba saina izy ireo sady nambanany basy lava misy antsy teo amin’ny tendany. Tsy nanaiky anefa ireo rahalahy, ka nasainy nodarohana indray.
Nandeha niadana nankany amin’ilay toby ireo rahalahy isa-maraina, sady nieritreritra hoe inona indray no hanjo azy ireo. Nivavaka izy ireo teny an-dalana ary nifampahery mba tsy hivadika. Nijaingijaingy nody izy ireo isan’alina sady mangana sy nivoa-dra, nefa faly fa tsy nivadika tamin’i Jehovah.
Rehefa henon’ny tao amin’ny biraon’ny sampana hoe nampijalina ireo rahalahy, dia nandefa fitarainana tany amin’ireo lehiben’ny miaramila isan-tsokajiny izy ireo. Nandefasany daholo ny tany Waingapu, Timaoro, Bali, ny teto Jakarta, ary ny manam-pahefana ambony hafa. Menatra ilay lehiben’ny miaramila tany Waingapu fa lasa fantatra eran’i Indonezia ny zava-dratsy nataony. Tsy nampijaly an’ireo rahalahy intsony àry izy.
“Hoatran’ny fantsika ny Vavolombelon’i Jehovah”
Vavolombelona maro eran’i Indonezia no nosamborina sy nalaina am-bavany ary nampijalina, nandritra ny taona maro taorian’izay. Hoy ilay misionera atao hoe Bill Perrie: “Betsaka ny rahalahy tsisy nify anoloana intsony, noho ny fampijaliana nahazo azy. Rehefa nahita rahalahy mbola tsy banga ny hafa dia nivazivazy hoe: ‘Vaovao angaha ianao sa nanaiky lembenana?’ Faly sy nazoto nanompo an’i Jehovah foana anefa ireo rahalahy na dia nenjehina aza.”
“Lasa niantehitra bebe kokoa tamin’i Jehovah aho tany am-ponja, ka vao mainka natanjaka ara-panahy”
Vavolombelona 93 no nomelohina higadra roa volana ka hatramin’ny efa-taona, nandritra ny 13 taona. Vao mainka anefa izy ireo tapa-kevitra ny tsy hivadika. Nitsidika an’ireo rahalahy tao amin’ny faritaniny i Musa Rade, rehefa avy nigadra valo volana, satria te hampirisika azy ireo hitory foana. Hoy izy: “Lasa niantehitra bebe kokoa tamin’i Jehovah aho tany am-ponja, ka vao mainka natanjaka ara-panahy.” Tsy mahagaga raha nisy nilaza hoe: “Hoatran’ny fantsika ny Vavolombelon’i Jehovah. Arakaraka ny amelezanao azy no vao mainka ifikirany amin’ny finoany.”
Mpitory handeha hitory any Ambon, any Maluku
^ feh. 1 Efa 60 taona mahery i Peter Vanderhaegen sy Len Davis, ary misionera efa ela izy ireo. I Marian Stoove indray nanambady Indonezianina. Afaka nijanona teto izy telo ireo noho izany. Nazoto nanompo foana izy ireo ary nahita vokatra na teo aza ny fandrarana.
Indonezia: Tapa-kevitra ny Hanohy ny Asa